Wasaaradda deegaanka Puntland oo ganacsatada u jeedisay in wax laga bedelo habka loo dhaqdo Geela caano-teelka ah – Kalfadhi
Wasaaradda deegaanka, Beeraha iyo Isbedelka cimilada ayaa dhaliishay nidaamka loo dhaqdo geela caano-teelka ah ee loo yaqaan “Barqo maal” iyo “fiid maal” oo ku sii kordhaya suuqyada magaalooyinka waa weyn ee Puntland.
Geelaan oo isku darsada daaq, cuntooyin adag sida Gallay iyo calafka xoolaha ayaa ganacsatadu ka maalaan caano badan oo ay iib keenaan, waxaana lagu dhaqaa meelo aan ka fogayn magaalooyinka.
Wasiirka deegaanka Ismaaciil Diiriye Gama’diid oo maanta shir jaraa’id qabtay wuxuu sheegay in geelaas oo marba meel loo raro loona sameeyo xerooyin hor leh uu dhibaato ku yahay deegaanka iyo daaqsinka, loona baahan yahay in wax laga bedelo habka dhaqashadiisa.
Dhibaatada Geela caano-teelka uu deegaanka ku keenay ayaa wasiirku ku sheegay dhulkii oo isu bedelay gelgelin, jarista dhirta, gaadiidka caanaha ka soo qaada oo dooxooyinkii iyo samo-deegaanadii wadooyin ka dhigay, daaq dhaaf joogta ah oo horseeday xaaluf baahsan oo ku dhacay mugta daaqa, dikhowga aaga Geelu ku jiro maadama qashin badan lagaga tago.
Wasaaradu waxay u jeedisay xoola-dhaqatada leh Geelaas in ay la tashtaan hawlwadeenada iyo isu-duwayaasha arrimaha deegaanka, si loo maareeyo daaqsinka Geela loona badbaadiyo deegaanka.
Maxkamada gobolka Nugaal oo dil ku xukuntay shan dhalinyaro ah oo kufsi ku eedaysnaa